Antony 10 Manasatra Tena Reraka Rehefa Miasa - -Kevi-Pitantanana
Antony 10 Manasatra Tena Reraka Rehefa Miasa
Mahatsiaro reraka ve ianao rehefa mody avy miasa?
Misy antony - na maromaro, angamba.
Ny fahatsapana reraka aorian'ny andro iray niasana dia mahazatra, fa misy ihany koa ny fomba fanalefahana azy sy hanamaivanana ny havizanana.
Andao hihoatra ny folo ny antony mahatonga anao ho reraka aorian'ny asa - ary manolotra fomba hiadiana amin'izy ireo sy hamahana ireo olana!
1. Nahazo fotoana be loatra amin'ny efijery ianao.
Raha miasa amin'ny birao ianao dia mety amin'ny solosainao mandritra ny ora maromaro isan'andro. Na dia lasa fenitra ho an'ny ankamaroantsika aza izany dia tsy salama!
Ny masontsika dia mety ho reraka amin'ny fijerena efijery iray tontolo andro, ary ny lokon'ny efijery dia mety hisy fiantraikany amin'ny toe-pontsika.
Ady ity: Mialà sasatra efijery! Eny, tsotra toy izany ihany izy. Omeo fitsaharana ny masonao amin'ny fijerena lavitra ny efijeryo - na fanidiana ny masonao - mandritra ny iray minitra na roa, isaky ny 20 minitra, na ilaina izany.
Homena hozatrao amin'ny masonao ny hozatra amin'ny fihenjanana hamaky lahatsoratra na hijerena sary. Manome ny ati-dohanao somary milentika koa izany.
Ary mandamina fitsapana amin'ny maso any amin'ny optika raha marary an-doha matetika ianao - mety mila solomaso ianao amin'ny asa.
2. Reraka amin'ny fifandraisan'ny tena manokana ianao.
Na eo aza ny fiarahamonina sy ny maha-olona anao, ara-dalàna ny fahatsapana ho ketraky ny fifandraisana amin'ny hafa - indrindra ireo izay tsy voatery hankafizintsika!
Tsy mahatsiaro ho reraka ny firesahana amin'ny namanao mandritra ny ora maro satria tianao izy ireo.
Ny fifanakalozana lahateny kely amin'ireo mpiara-miasa aminao na ny fivorian'ny fivoriana miaraka amin'ireo mpitantana dia tsy mitovy.
Izy io dia mety mitaky fisondrotana amin'ny haavon'ny angovo misy anao. Tena marina izany raha introvert ianao.
Ara-dalàna ny fahatsapana ho reraka aorian'ny fifandraisana amin'ny olona tontolo andro, saingy misy fomba ahafahanao manome hery anao ...
Ady ity: Miezaha mametra ny fifandraisanao raha mety. Mitsangàna hanao dite na kafe rehefa foana ny lakozia fa tsy miditra amin'ny vahoaka.
Ento ato amin'ny birao ny sakafo atoandro ary ampidiro ny sofinao hihinana eo amin'ny latabatrao (lazao amin'ny olona miasa ianao raha te hisoroka ny fanasana anao!).
Ataovy faran'izay fohy ny fivoriana raha mbola mijanona mahalala fomba.
Mety hahatsapa ho somary somary saro-kenatra ihany ianao, saingy tsy hisy hieritreritra hoe tsy mahalala fomba ianao rehefa manana fotoana mangina kely indraindray, ary hanampy be dia be ny haavon'ny angovo misy anao io.
3. Miasa amin'ny adin-tsaina ianao.
Raha ao anatin'ny tontolo misy fihenjanana ianao dia tsy maintsy mahatsapa fa reraka sy reraka tsara ianao amin'ny faran'ny andro.
Mampihena angovo be dia be isika rehefa tratry ny fieritreretana - indraindray aza mandoro kaloria bebe kokoa ary mety misy soritr'aretina ara-batana toy ny fanaintainana sy fanaintainana.
Tsy tokony hahagaga raha reraka haingana kokoa ny vatantsika sy ny saintsika rehefa misy fihenjanana.
Ady ity: Miezaha mitady fomba hanafoanana adin-tsaina raha mbola any am-piasana ianao. Mety hidika izany fa maka fialan-tsasatra bebe kokoa, mihinana sakafo mahasalama, na mametraka playlist aza.
Azonao atao ny mihaino mozika mampitony, mivoaka ivelany ary miantso olona tianao raha mila resaka papi kely ianao, na mankanesa any amin'ny fandroana ary manaova fisaintsainana mandritra ny minitra vitsy.
Izay azonao atao mba hampihenana ny haavon'ny adin-tsainao any am-piasana tena hanisy fiovana amin'ny haavon'ny angovo misy anao aorian'ny asa.
4. Miasa am-batana ianao.
Mety manana asa manana lafiny ara-batana be dia be ianao - angamba an-tongotrao tontolo andro ianao, na tsy maintsy mitondra zavatra mavesatra na manao fanamiana teritery, toy ny PPE.
Raha ny asanao dia midika hoe mivezivezy foana ianao, tsy mahagaga raha reraka ianao rehefa mody!
Ny vatantsika dia tsy natao hihetsika tsy tapaka, noho izany ny fiovana lavitra amin'ny fitsangatsanganana sy fitsanganana dia mety hitondra ny vokany eo amin'ny haavon'ny angovo eto amintsika.
Ady ity: Miezaha ahazoana antoka fa mihinana zavatra voalanjalanja sy mahavelona alohan'ny asa ianao, ary manaova fotoana hikarakarana sakafo kely mampatanjaka angovo toy ny voankazo na voanjo.
Ahinjiro tsara - indrindra ireo hozatra ampiasainao indrindra - na taloha na aorian'ny fiovana. Ary mandro mafana mafana vetivety rehefa mody miala sasatra.
Ny fahazoana antoka fa miomana amin'ny andro ara-batana ny vatanao dia handeha lavitra amin'ny resaka fampihenana ny havizanana tafahoatra rehefa tonga any an-trano.
5. Tsy dia mampiasa tsara ny atidohanao ianao ary mankaleo.
Ny maha-tena sahirana antsika dia mety hahatonga antsika ho reraka - fa tsy ho sahirana loatra koa!
Tsy rariny, marina?
Raha tapitrao ny andro hahatsapanao fa reraka ianao, dia mety ho noho ianao tsy nanao zavatra ampy hibahana ny sainao.
Indraindray, reraka ny atidohantsika noho ny tsy fampiasana azy - mety ho zatra rendremana izy ireo noho ny tsy fisian'ny fanentanana, na mahatsiaro ho reraka ara-tsaina isika satria ny ati-dohantsika dia manjary soritry ny fahasosorana, fahasosorana, fahatezerana.
Raha sendra sosotra ianao amin'ny tsy fisian'ny asa tokony hataonao, na amin'ny fahatsapanao ny tsy famokarana, dia mety ho izany no antony nilentika tamin'ny andro farany.
Ady ity: Noho izany, ny maha-be atao raha ny marina dia tsara ho an'ny haavon'ny angovo eto amintsika? Ie! Raha afaka mahita medium sambatra ianao, dia ho reraka kokoa ianao - ary hamokatra bebe kokoa.
mihetsika haingana loatra amin'ny fifandraisana
Miezaha mametraka ny tanjonao isan'andro (na isan'ora, raha manampy izany), ary alao antoka fa miovaova ny zavatra ataonao matetika ianao.
Mandany ny maraina fihaonana amin'ny fe-potoana farany hanaovana asa fitantanan-draharaha, ary avy eo manokana ny tolakandro mba hiasa amin'ny takelaka, ohatra.
Ny fampifangaroana zavatra dia hanampy anao hahatsapa fifantohana bebe kokoa amin'ny zavatra ataonao ary hampiato ny sainao tsy hivezivezy sy mankaleo.
6. Mila sakafo sy otrikaina bebe kokoa ianao!
Olana mahazatra toy izany ny olona amin'ny fiainana andavan'andro, ary tsy misy hafa amin'izany rehefa miasa isika.
Miaraka amin'ny fihazakazahana hivoaka amin'ny varavarana amin'ny maraina, maro amintsika no tsy manana sakafo maraina mahasalama sy mameno.
Mety ho be atao amin'ny sakafo atoandro isika ka tsy hihinana sakafo voalanjalanja ary hiafara amin'ny fakana sandwich lehibe na tsakitsaky fotsiny.
Na dia tena fahita aza io dia tsy tsara ho an'ny vatantsika izany ary mety hahatonga antsika hahatsiaro ho reraka!
Ny fihazakazahana amin'ny foana, na ambany amin'ny otrikaina, dia misy fiatraikany lehibe amin'ny tanjaky ny angovo ary mety hidika hoe resin-tory aorian'ny asa isika.
Ady ity: Miezaha hihinana sakafo maraina (na alohan'ny hanombohan'ny fifindranao). Omano ny sakafonao ny alina talohan'izay raha azonao atao - ny oats iray alina dia safidy mora sy mahavelona, ​​na mety manety voankazo ianao raha tianao.
Miezaha manamboatra sakafo atoandro feno sakafo ihany koa. Hitahiry vola ianao ary midika fa nahazo zavatra matsiro ianao hitohy mandritra ny andro. Mitsofoka amina sakafo kely mahasalama vitsivitsy hiadiana amin'ny fahalavoan'ny tolakandro…
7. Mampatory anao ny fihetsikao.
Mety hafahafa ny feony, fa ny fomba fipetrahanao dia misy fiatraikany amin'ny vatanao mihoatra lavitra noho ny lamosina mangidihidy! Izy io dia afaka manome anao olana ara-pandevonan-kanina, miantraika amin'ny toetranao ary miteraka havizanana.
Raha matetika ianao no mahatsapa somary maharary sy matory rehefa miala amin'ny asa ianao dia mety noho ny filatsahanao amin'ny sezanao na ny fipetrahanao 'winkily.'
Arakaraky ny hametrahana ny vatantsika amin'ny toerana tsy voajanahary no vao mainka 'fihetsiketsehin'izy ireo' sy ny fambara sasany.
Ady ity: Miezaha miasa amin'ny fihetsikao! Azonao atao ny mametraka fampandrenesana amin'ny findainao ho fampahatsiahivana raha mila ianao - hipetraka mahitsy na hiarina hanetsiketsika kely ny rantsam-batanao.
Ny toeram-piasanao dia mety hanolotra dian-tongotra izay afaka manampy anao hiasa amin'ny toeranao, ary koa ny tohana sy ny tadin'ny lamosina raha ilainao izany. Any amin'ny firenena sasany, adidy ara-dalàna izany, ka azo antoka fa mendrika hijerena!
8. Tsy dia maka aina ianao.
Raha mahatsiaro tena ho reraka ianao rehefa mody avy any am-piasana dia mety satria tsy miala sasatra matetika ianao.
Ity karazam-pifandraisana ity dia misy ifandraisany amin'ny olana manodidina ny fotoana an-tsehatra, fa mety ho tranga iray be loatra loatra amin'ny atidohanao ihany koa.
Raha tsy maka sasatra ampy ianao dia manjary tototry ny mailaka, mozika, resaka, tsy tapaka ny atidohanao!
Zava-misy tokoa ny fihoaram-pefy noho ny fahatsapana, ary mandany…
Ady ity: Mametraha fanairana amin'ny telefaonao ary omeo fotoana 5 minitra na mihoatra ny famerenanao ary makà aina kely.
Ahinjiro ny tongotrao, manaova fialan-tsiny hahazoana rivotra, ary mamelombelona mandritra ny andro mba hanananao angovo bebe kokoa amin'ny fotoana hodianao.
9. Tsy ampy hidiran'ny rano ianao.
Ny rano no vokatra fahagagana tadiavintsika rehetra fa tsy tena mifamihina! Manampy ny hoditra, ny volontsika… ary ny haavon'ny angovo eto amintsika!
Raha lasa matory ianao amin'ny faran'ny andro, dia mety noho ianao tsy ampy rano. Arakaraky ny hakelin'ny rano ao amin'ny vatantsika no mahabe reraka antsika - mora izany!
Ady ity: Makà tavoahangy misy rano amin'ny ora andavanandro, mba ho fantatrao hoe ohatrinona ny rano tokony hosotroinao isaky ny teboka amin'ny andro.
Mametraha fanairana amin'ny telefaoninao hiarina sy hisotro zava-pisotro. Manaova tabilao kintana, na misintoma fampiharana izay manampy anao hanaraka ny fanjifanao rano isan'andro.
Na inona na inona ataonao, andramo ny mifanaraka amin'izany. Azonao atao ny mividy voatavo tsy misy siramamy raha manampy anao misotro bebe kokoa, na manala azy mandritra ny alina raha tianao ny rano mangatsiaka!
10. Mihena ianao noho ny siramamy sy kafeinina be loatra.
Mety hahatsapa ho salama tsara ianao mandra-pahatongan'ny 2 hariva. Raha mandeha tsara ny andronao hatramin'ny folak'andro hariva rehefa reraka tampoka ianao ary tsy ampy torimaso eo amin'ny latabatrao dia tsy irery ianao.
Mety ho vokatry ny zavatra maro izany - mety ho vokatry ny fihinanana sakafo antoandro mahery, na fihenan'ny angovo noho ny fianjan'ny siramamy. Raha manana sakafo mamy sy kafe mamy ianao mba hanohizanao rehefa avy misakafo antoandro dia mety hahatonga anao ho reraka be rehefa tonga any an-trano.
Ady ity: Miezaha hihazona ny siramamy sy kafeinina voalanjalanja mandritra ny andro - indrindra ny tolakandro. Ary mikendry sakafo atoandro maivana kokoa mba tsy ho voky sy hatory be loatra ianao!
Ny mandeha an-tongotra haingana aorian'ny fisakafoanana antoandro dia tena afaka manampy anao. Raha tsapanao fa mila kafeinina ianao hamakivakiana ny tolakandro dia makà rano mangatsiaka iray vera aloha. Indraindray, ny havizanana dia avy amin'ny tsy fahampian'ny rano, noho izany dia mendrika ny manandrana rano alohan'ny hamelezana ny kafe.
Raha mbola maniry ny hisotro kafe ianao dia mandehana tifitra iray (na decaf!) Ary ialao ny siramamy mamy.
Arakaraka ny mahaizanao mitazona ny vatanao amin'ny tolakandro, vao mainka ianao hanana hery aorian'ny fiasana.
Sasatry ny miasa? Ireto misy fomba 11 hamakivakiana ny tontolo andro.
33 ny soritr'aretin'ny fahamaizana amin'ny asa + Dingana 10 hanarenana azy io
ahoana no ahalalana vehivavy tia anao
nahoana no zava-dehibe ny fanajana ny zon'ny hafa
wwe mpanjaka amin'ny fonosana peratra
mandra-pahoviana no nanambadian'i grook brooks sy trisha yearwood
ny fomba hifehezana ny resaka be loatra
ahoana ny fijanonana tsy ho tia